Lapho sichitha impelasonto, sifuna ukujabulela isikhathi sethu samahhala futhi sinikele usuku enjabulweni yethu esiyithandayo. Lapho singafuni ukuphazanyiswa izingcingo, sidinga i-jammer yesiginali yeselula ukulwa nezingcingo eziphazamisayo. Kwesinye isikhathi, asifuni ukukhuluma nanoma ngubani, kepha abantu abacasulayo bazogcina izingcingo ...
Ukujikijela umakhalekhukhwini kuhloswe kakhulu ezindaweni ezahlukahlukene lapho kungavunyelwe khona ukusetshenziswa komakhalekhukhwini, njengamagumbi okuhlolwa, izikole, amagalaji kaphethiloli, amasonto, izinkantolo, imitapo yolwazi, izindawo zezingqungquthela, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, izibhedlela, ohulumeni, ezezimali, amajele, ukuphepha komphakathi nezindawo zamandla ezempi. Nini...
Isimiso sefoni ephathekayo iJammer
I-jammer yomakhalekhukhwini ihlose kakhulu kuzo zonke izindawo lapho kungavunyelwe khona ukusetshenziswa komakhalekhukhwini, njengamagumbi okuhlola ahlukahlukene, izikole, amagalaji kaphethiloli, amasonto, izinkantolo, imitapo yolwazi, izindawo zezingqungquthela, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, izibhedlela, ohulumeni, ezezimali, amajele , ukuphepha komphakathi nezempi ...
Kungani I-GPS Jammers Idume Kangaka
Kulezi zinsuku, ama-jammers wesiginali ye-GPS adlala indima ebaluleke kakhulu ezimpilweni zethu. Inani lezindawo ezisetshenziswayo liyanda.Kungani ama-GPS jammers athandwa kangaka? Ukuthandwa kwe-GPS jammers kuhlobene kakhulu nokusetshenziswa okubanzi kwama-tracker we-GPS, ngoba amadivayisi wokulandela umkhondo we-GPS asetshenziswa kabanzi uku ...